Khudbadii Musharax Jibriil oo dhameystiran iyo Saameyntii ay ilaa haatan yeelatay | Baahin -News, Sports, Views, Entertainment, War On Terror, Health and Social Affairs
Khudbadii Musharax Jibriil oo dhameystiran iyo Saameyntii ay ilaa haatan yeelatay
Musharax Jibriil Ibraahim Cabdulle ayaa khudbad xasaasi ah ka jeediyay maanta iyadoo uu ahaa musharaxa ugu saameynta badan ilaa haatan.
Waxaan ka bad baaday dilal farabadan anigoo ka shaqeynaysa , waxaan wax ka dhisnay maamul goboleedyada dalka dhamaantood , maamulada aad hada wakiilka ka tihiin.
Waxaan rabaa in aan idinla wadaago aragti siyaasadeed oo aan halkan ku joogo , waxa ugu weyn waa cadaalada , cadaalada darada ayaa ah dhibaato weyn , oo ay muhimtahay in xal loo helo. ilaalinta garsoorka waa in ay noqotaa mid lagu jaangooyey aqoon , waxaa muhim ah in la ilaaliyo musuq maasuqa garsoorka ka jira ama ka iman karo , waa in la ilaaliyo sharciga.
Waxaan ka hortegayna cadaalada darada , waxaan ka hortegayna sharci jebinta , dib u heshiisiin siyaasadeed ayaa muhim ah in aan sameyno , dib u heshiisin hadii aysan jirina cadaalad ma jirto .
waxaa dib u habeyn ugu sameyn doona guddiga dib u heshiisinta qaranka , waxaa muhim ah in lasameeyo wasaarad gaar ah oo ka shaqeysa dib u heshiisinta .
dardargelinta xasiloonida iyo sugida amniga iyada waa no muhim waana nolosha oo dhan , amniga ayaan kusoo toosna ku shaqeyna , waxaan rabaa in wax laga bedelo wejigii lagu wadi jiray amniga .
waxaa talada amaanka ka qeybgelinayaa dowlad goboleedyada , si loo xoojiyo amniga, waxaan xuli doona khubaro joogto ah oo talooyin joogta ah ka bixiya amniga, mushaharka ciidanka amniga waxaa uu noqon doona mid joogto ah.
waxaa jira saraakiil maalin walbona dhinta , mushahar lama siiyo , cid dadkoodiina wa og ma jirto , waxaa haysta dhibaato qoysas, askarta noloshooda lagama war hayo , waana mid in aan ogaano xaaladooda mar walbo.
Sidaa lasocotaan 4sano ee lasoo dhaafay waxay ku dhamaatay dagaal u dhexeeya Dowladd goboleedyada iyo dowladda federaalka , anagu waxaan dibusoo celinayna isu soo dhoweynta dhinac kasta , waxaan u sinaan doona dowladd goboleedyada anagoo dhinac la jiri doonin, waxaan la sameyn doona shirweyne qaran iyo xoojinta wada shaqeynta ka dhaxeysa dowladd goboleedyada iyo dowladda .
Musuq maasuqo waxaa uu maraya dalka meel xun , meeshii u sareysay ayuu gaaray , qaranimada ayuu burburiyay, iyadoo laga tashanayo labada aqal oo ay ku jiraan dad magac ku leh soomaali , dadkaasi oo ka shaqeyn doona wax ka qabashada musuq maasuqa.
Waxaa si dhakhso ah boqolka maalin ee u horeysa guddiga iibka qaranka in la sameeyo , si loo xakameeyo iibka hantiada qaran , hayadaha warbaahinta ayaa loo isticmaali doona si siman.
waxaan dhalinyarada siin doona fursad ay si siman uga helaan shaqo iyo ka qaybqaadasho furasadaha kale ee dalka ka jiran , waxaan rabaa in aan wax ka qabano dib u habeyn lagu sameeyo arrimaha dibada .
Waxaa la galay heshiisyo qoraal ku kooban oo xitaa uusan ogeyn baarlamaanka xitaa , waxay ka midtahay qaranimada Soomaliya , iyo arimaha dibada , arintasi mardanbe ma jiri doonto hadan xilka qabto.
Somaliland waxaan rumaysanahay in xalku ku jiro wada hadalo toos ah oo u dhexeeya dadka kala aragti duwan , wada hadalku waa mdi wax looga qaban karo mar walbo dadka isirka somalinimo ka dhexeeyo oo aan kala maarmin.
Amniga xildhibaanada wax ayaan ka qaban doona , anagoo og in xildhibaano badan dalkan laga dilay , waxaan ballan qaadayna in aan labada aqalba si wanaagsan ula shaqeyn doono.
Shaqaalaha dowladda , dhibaatada jirta waxaa weeye dowlada markay baxdo oo wasiirak baxo shaqaalihiina waa la baxaya , waxaa muhim ah in la tayeeyo shaqaalaha , si hadii wasiirka u baxo ama agaasinka u baxo , in shaqalaha shaqada lasii wado karo , waxaan rabnaa inaan sameyno dowladd la iska dhaxli karo .
Hadii aad isiisaan codkiina ilaahayna ii aqbalo, waxaan ballan qaadaya in aan wax walbo sheegay aan wax ka qabanayo, anigu qabiil ma ihi , qoysna ma ihi , waxaan lee ahay aragti siyaasadeed oo dalkan wax looga qaban karo , sidaasi daraadeed baan xildhibaanada sharafta leh u lee ahay aad uga taxadara aqoontayda iyo shaqooyinka aan soo qabtay.
Isbedel in uu imaan karo ayaa ii muuqata , anigana aan isbedelka dadka keeni karo ma jirto , xoolaha kuwooda cusub markay waa ugub , waxaan idinka codsanaya in aad doorataan qof cusub oo idinla shaqeyn kara”